SHOCK As South Africa Backs Zanu PF's Anti-Protests Stance :: Zim Metro
SHOCK As South Africa Backs Zanu PF's Anti-Protests Stance
Published: 2016 July 12 18:52:26 (2501 Views)
The African National Congress (ANC), today today shocked all and sundry when it supported Zanu PF's unwarranted claim that recent civilian protests rocking Zimbabwe were sponsored by those seeking regime change.
The party party said it was concerned by the mass protests against President Robert Mugabe’s government which it labelled as "sponsored elements seeking regime change."
Ironically, last week Zimbabwe government officials claimed that the protests at the Beitbridge Border post were sponsored by South Africans.
“The struggling Zimbabwean economy, which has been going on for a long time, should not give a licence to regime change elements to revive restlessness in Zimbabwe. Every citizen of Zimbabwe should appreciate the difficulties and contribute positively in the regulation of the Zimbabwean economy,” said ANC Secretary General Gwede Mantashe.
A social media campaign dubbed “ThisFlag” and “ZimShutDown2016” saw Zimbabwean citizens stay home last week, in protest against Mugabe's poor administration.
Tags: Anc, Zanupf, protests, Zimbabwe, SouthAfrica,
Anonymous user 2016 July 13 07:58:49
South Africa is not ANC as Zimbabwe is not ZANU PF and after all, citizens are not doing any activities for these political parties but for the country.